Ibutamoren Mesylate (MK677) Powder Vagadziri - Phcoker
Ibutamoren Mesylate (MK677) poda, inozivikanwawo seMK677, MK-677, MK-0667, uye L-163,191, …… ..
Ibutamoren Mesylate APane Kukura kwehomoni kusunungura chinhu; inoshandura metabolism yemafuta emuviri; kuwedzera zvese mhasuru uye mapfupa emamineral density; inoshandura metabolism yemafuta emuviri
Chinhu chikuru nezve ibutamoren mesylate ndechekuti inowedzera kukura kwehomoni mazinga nekuwedzera kana kusawedzera mune mamwe mahormone, senge cortisol. Cortisol inodzvinyirira immune system, inoderedza kupora kwemaronda, uye inokanganisa kudzidza nekurangarira, uye kazhinji hazvina kunaka kuve neiyi hormone yakwidziridzwa.
677 MKXNUMX May Kubatsira neBone Density
677 MKXNUMX May Inogona Kuwedzera Kuwedzera KweMhasuru
677 MKXNUMX May Kubatsira Kuderedza Tsvina Kutambisa
677 MKXNUMX May Kubatsira Nekurara
677 MK XNUMX May Kuderedza Migumisiro Yekukwegura
677 MKXNUMX Angave Ane Nootropic Mhedzisiro paBongo